Home / iReport / Ndi Igbo Kwenu nọzi na Nkoli.com
ndiigbokwenu1 August 21, 2016	iReport Leave a comment 726 Views
Naedum Domnwachukwu bụ onye mmeri na 2016 Edison Scholars Program
Ndị beanyị ndewo nu ooo! Ndi Igbo Kwenu nọzi na Nkoli.com. Unu ma na Nkoli bụ ezigbo ohere nwanne anyị mepụtara iji chịkọta ndị obi ọma. Ọbụrụ na anyị bụ ndị Igbo nwere ike ịnọ na Facebook, Twitter, na LinkedIn ndị ọcha mepụtara, anyị kwesịrị ịchịkọ aka kwalite Nkoli nke onye Igbo wepụtara. Nkoli n’enye ụmụigbo efe ịme ọtụtụ ihe ohere ndị ọzọ adịghị ekwe ka ndị mmadụ mee.
Nkoli bụ ebe gị bụ nwaafọ igbo nwere ike izute ụmụigbo ibe gị. Bịa nu soro anyị kwalite ohere-a nwanne anyị malitere. Jee banye na Nkoli ma gwa kwa ndị enyi gị maka Nkoli. Ọbụrụ na ị nọ na Nkoli, biko mee ka anyị mata site na ịsepụta profile gị (Screenshot) gosi anyị.Echefukwala iso anyị ebeahu www.nkoli.com/ndiigbokwenu ka anyị kwalite ihe gbasara asụsụ na omenala ndị igbo. Igbo ga-adị.
Previous Okwu Ochi 1: Mgbechikwelụ
Next King Pwest – Ma City